Fanapariahana héroïne : Tanzanianina no tena atidoha -
AccueilSongandinaFanapariahana héroïne : Tanzanianina no tena atidoha
Fanapariahana héroïne : Tanzanianina no tena atidoha
Miha mahazo vahana hatrany ny fiparitahan’ny zava-mahadomelina mahery vaika eto Madagasikara. Efa fantatra avokoa ny atidoha amin’ny fampidirana azy ireny eto an-toerana, ary isan’izany ireo teratany tanzanianina. Vao tamin’ny 25 aprily lasa teo no nahitana trangana fanondranana an-tsokosoko “héroïne” iray kilao indray teny amin’ny kaominina Mahitsy, ary teratany tanzanianina iray sy malagasy roa no tompon’antoka nitondra izany. Araka ny loharanom-baovao avy eo anivon’ny kaompanian’Imerina Central dia fanomezam-baovao sy fiaraha-miasa tamin’ny olona tsara sitrapo no nahafantarana fa misy fiara taksiborosy handeha ho any Diego nitondra zava-mahadomelina mahery vaika. Narahana avy hatrany noho izany io fiara fitateram-bahoaka voalaza io, ka tratra tao amin’ity kaominina ity. Rehefa nataon’ireo mpitandro filaminana ny fisavana, dia tratra tao tokoa ny “héroïne” izay nafangaro tamin’ny “nouille” tao anaty baoritra. Tra-tehaka niaraka tamin’ny entana ihany koa io teratany vahiny io sy ny saofera ary vehivavy iray mpiray tsikombakomba taminy. Nosamborina ary nentina nanaovana fanadihadiana teny amin’ny biraon’ny zandary avy hatrany moa ireto farany, ka nandritra izany no nahafantarana fa amidy manodidina ny 200 000 Ariary ka hatramin’ny 300 000 Ariary ny iray grama amin’io zava-mahadomelina mahery vaika io. Izany hoe tombanana manodidina ny 300 tapitrisa Ariary ny vidin’io iray kilao sarona io. Mbola tsy fantatra mazava kosa hatreto ny toerana niavian’ity “héroïne” ity.
Araka ny nambaran’ny Lietna Ramanandraibe Rija Lalaina, kaomanda kaompanian’Imerina Central, dia fantatra fa efa tambazotra matanjaka mihitsy no ao ambadik’ity fanondranana “héroïne” tratra teny Mahitsy ity, raha ny habetsaky ny entana nojerena. Raha ny fanampim-panazavany ihany koa dia efa ela no nampidirina izany teto amintsika saingy taomin’izy ireo tsikelikely, ary rehefa betsaka vao amidy. Matetika moa, dia efa misy mpandray foana ireo “héroïne” sy “cocaine” alefa eto Madagasikara, ary ireo teratany vahiny monina sy mipetraka eto an-toerana no tena mividy izany sy mampiasa teratany malagasy indray avy eo. Tonga hatrany amin’ny fisavana ny antontan-taratasy ahafahan’ity teratany vahiny ity niditra sy mipetraka eto amintsika moa izao fahatrarana azy nanao asa maloto izao, saingy tsy nahitana fandikan-dalàna. Omaly no niakatra teo anatrehan’ny fampanoavana ny raharaha, ary mbola hitohy anio ny fihainoana ireto olona telo voasambotra ireto.
Zaridainan’Anosy : Natolotry ny Filoha mivady ho an’ny vahoaka